Liaoning လျောင်းနင်ပြည်နယ် သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ၏ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသော ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ တရုတ်ဘာသာစကား အတိုကောက်အားဖြင့် လျောင် ("Liao-辽") ဟု ခေါ်ဆိုပြီး ယင်းအမည်သည် ပြည်နယ်အတွင်း အလယ်တည့်တည့်မှ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားသော လျောင်မြစ် (Liao River) မှ ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ နင် ("宁 -Níng") ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ် လျောင်းနင်ပြည်နယ်ကို ၁၉၀၇ခုနှစ်တွင် ဖွင်းထျန်းပြည်နယ် (Fengtian province - 奉天) အဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၉ခုနှစ်တွင် လျောင်းနင်ပြည်နယ်ဟု အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ဂျပန်တို့၏ ရုပ်သေးအစိုးရ ဖြစ်သော မန်ချူးကိုးနိုင်ငံ ခေတ်တွင် ယခင်အမည်ဖြစ်သော ဖွင်းထျန်းပြည်နယ်သို့ ပြန်လည်ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၅ တွင် လျောင်းနင်ပြည်နယ်ဟု တစ်ဖန်ပြန်လည်၍ ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
အဓိကမြို့ကြီးများမှာ ပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်သော ရှင်ယန်မြို့၊ တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော အန်းရှန်းမြို့၊ ဒုတိယအကြီးဆုံးနှင့် စီးပွားရေးလျှင်မြန်စွာဖွံဖြိုးနေသော တလျန်မြို့၊ နယ်စပ်မြို့ ဖြစ်သော တန်းတုန်းမြို့ ၊ ပင်ရှီးမြို့၊ ဖူရွှင့်မြို့ နှင့် ကျင်းကျိုးမြို့ တို့ ဖြစ်ကြသည်။ 
ပထဝီဝင်အနေအထားအရ သုံးပိုင်းခွဲခြားနိုင်သည်။ အနောက်ဘက်ပိုင်းတွင် ကုန်မြေမြင့်ပိုင်း, အလယ်ပိုင်းတွင် လွင်ပြင်များ နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် တောင်ကုန်းများ ရှိသည်။ အနောက်ဘက် ကုန်းမြေမြင့်ပိုင်းတွင် နူလူအာရ်ဟုတောင်တန်း (Nulu'erhu Mountains) ဖြင့် အတွင်းမွန်ဂိုလီးယားပြည်နယ်နှင့် ပိုင်းခြားထားသည်။ ဒေသတစ်ခုလုံးကို တောင်ကုန်းနိမ့်များ ဖုံးလွှမ်းလျှက်ရှိသည်။ ပြည်နယ်၏ အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် လျောင်မြစ်, တလျောင်မြစ် နှင့် အခြား မြစ်လက်တက်များ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းလျက်ရှိပြီး အများအားဖြင့် မြေနိမ့် လွင်ပြင်များ ဖြစ်သည်။ အရှေ့ပိုင်းတွင် ချောင်ပိုင်တောင်တန်း (Changbai Mountains) နှင့် ချန်ရှန်းအမျိုးသားဥယျာဉ် (Qianshan National Park) တို့ဖြင့် ဖုံးလွှမ်းနေသည် ယင်းတောင်တန်းများသည် လျောင်တုန်းကျွန်းဆွယ် (Liaodong Peninsula) ဘက်သို့ ထိုးဆင်းသွားသည်။ ဒေသတွင်းအမြင့်ဆုံးတောင်ထွတ်အနေဖြင့် ၁၃၃၆ မီတာ မြင့်သော ဟွာပေါ်ဇီတောင်ထွတ် (Mount Huabozi) တည်ရှိသည်။ တိုက်ကြီးများမုတ်သုန်ရာသီဥတု (continental monsoon climate ) မျိုး ရရှိသည်။ တစ်နှစ်တာ ပျမ်းမျှမိုးရေချိန်မှာ ၄၄၀ မှ ၁၁၃၀ မီလီမီတာ ကြား ရရှိသည်။ နွေရာသီတွင် မိုးရွာတတ်ပြီး အခြားရာသီများတွင် ခြောက်သွေ့နေသည်။
စီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဇုန်များ
Liaoning Travel Guide: Map, History, Sightseeing, Ethnic Minority, Climate။ 2010-03-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Dezan Shira & Associates။ Dezan Shira & Associates (2009)။ 2009-02-08 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
China Liaoning Business Guide။ 1 July 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-08-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
先秦辽阳地区部族问题初探။7July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Edmonds၊ Richard Louis (1985)။ Northern Frontiers of Qing China and Tokugawa Japan: A Comparative Study of Frontier Policy။ University of Chicago, Department of Geography; Research Paper No. 213။ pp. 38–40။ ISBN 0-89065-118-3။
Xingjing။4March 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Dongjing။4March 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 8 October 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
China Briefing Business Reports။ Asia Briefing (2009)။ 20 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-02-08 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
China Liaoning Business Guide။5July 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
China Liaoning Business Guide။ 1 July 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။